10 सामाजिक मिडिया अपनाउने व्यवसायको लागि सफलताका कुञ्जीहरू Martech Zone
10 सामाजिक मिडिया अपनाउने व्यवसायको लागि सफलताका कुञ्जीहरू
बिहीबार, मे 14, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज बिहान मैले एउटा कम्पनीसँग भेटें र मैले किन र किन व्यवसायिक सामाजिक मिडिया टेक्नोलोजी अपनाइरहेको छ भनेर सकेसम्म साझा गरे।
धेरै धेरै कम्पनीहरूले पहिले डाइभिंग गरिरहेछन् र त्यसपछि मुद्दाहरू पछि क्रमबद्ध गर्न कोशिस गर्दैछ तर म विश्वास गर्दछु कि यसले कम्पनीको सफलतालाई गम्भीर रूपमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। धेरै पटक, हामी सामाजिक मिडिया रणनीति कार्यान्वयन गर्न दोस्रो मौका प्राप्त गर्दैनौं। कर्पोरेट ब्लग सहित परित्याग गरिएको सोशल मिडिया प्रोजेक्टहरूको बढ्दो चिहान हो, प्रतिभाशाली कर्मचारीहरू र महान् इरादेका साथ कम्पनीहरूले सुरु गरे।
राम्रो फाउंडेशनको विकास गर्न सावधान रहनाले कम्पनीलाई पैसा बचत गर्न, राजस्व बढाउन र कर्मचारीहरू, ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूसँगको संचार सुधार गर्न सोशल मीडिया प्रविधि प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा लिन सक्दछ।
प्लेटफर्म - यो तपाईको कम्पनीमा आउँदा सबैले के प्रयोग गर्दैछ प्रयोग गर्न पर्याप्त छैन। सुरक्षा, गोपनीयता, ब्याकअप, मर्मत, अप्टिमाइजेसन, एकीकरण समर्थनको साथसाथै प्लेटफर्म (हरू) कार्यान्वयन गर्न र मद्दत गर्न आवश्यक संसाधनहरू बुझ्न प्रत्येक प्लेटफर्म समीक्षा गर्न सकिन्छ।
पारदर्शिता - कम्पनीहरु लाई यो पहिचान गर्न महत्वपूर्ण छ कि यो ब्रोशर साइट होईन, न त यो स्प्यामिंगका लागि ठाउँ हो। कर्मचारीहरू, संभावनाहरू र ग्राहकहरू तपाईंले सोशल मीडियाको उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ किनकि उनीहरू तपाईंलाई चिन्न चाहन्छन् र तपाईंसँगको सम्बन्धले उनीहरूलाई कसरी फाइदा पुग्छ भनेर पूर्ण रूपमा बुझ्न चाहन्छन्।
सम्मिश्रता - तपाईंले सामग्री र आवधिकताको लागि व्यक्तिहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्नै पर्छ। सोशल मिडिया कुनै स्प्रिन्ट होइन, यो म्याराथन हो जसमा दर्शकहरूलाई चाँडै नै स engage्लग्न बनाउन धेरै स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ।
आवेग - तपाईको सफलता धेरै हदसम्म मानव संसाधनहरू पत्ता लगाउनमा भर पर्दछ जसले मध्यम मन पराउँछन्। प्रतिरोधी कर्मचारीहरू लागू र सामाजिक मिडिया उपयोग बनाउने तुरून्त झूटा रिंग र अझ अन्ततः विफलता को परिणाम हुनेछ।
सहभागिता - एक सामाजिक माध्यम को संख्या संख्या मा छ। टिप्पणी र नेटवर्किंग ड्राइभ यातायात र सामाजिक मिडिया मा रैंक। तपाईंले सहभागितालाई बढावा र इनाम दिनै पर्छ ... विशेष गरी विकासको शुरुका दिनहरूमा।
गति - स्थिरताका साथ, यो चिन्न महत्वपूर्ण छ कि सामाजिक मिडिया तपाईं केहि होइन खोल्नुहोस्। विकास र सफलताको लागि स्थिर, कठोर, र लगातार प्रयासको आवश्यक छ।
समिति - कार्यान्वयनमा विविधताले राम्रो परिणामको परिणाम दिनेछ किनकि बिभिन्न उपकरणहरूद्वारा बिभिन्न कर्मचारीहरू आकर्षित हुन्छन् (र प्रायः विचलित हुन्छन्)। यो आवश्यक छ कि एक टोलीले रणनीतिहरू र लक्ष्यहरू प्रदान गर्न दिशा प्रदान गर्दछ।
समन्वय - एक साइलोमा शुरू गरिएको सामाजिक पहलहरू ढिलो बढ्दछ र प्राय: असफल हुन्छ। मध्यम कार्यक्रमहरू बीचमा शारीरिक एकीकरण, सामग्रीको स्वचालन, र विभागहरू बीच समन्वय चाँडै तपाईंको प्रोग्राम बढाउनको लागि आवश्यक छ। तपाईंको साइट र ईमेलमा तपाईंको सामाजिक पहलहरूको प्रचार गर्नुहोस्। प्रत्येकको बीच सामग्री पुश गर्नुहोस् क्रस-पोलिनेटर ट्राफिकलाई प्रभावकारी रूपमा।
अनुगमन - सतर्कता र अनुगमन सेट गर्दै विश्लेषण तपाइँको टोली लाई खोजमा आधारित कार्य गर्न को लागी अनुमति दिनेछ।
लक्ष्यहरू - कम्पनीहरूले उनीहरूले वास्तवमा के प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन् वा कसरी उनीहरू सफलता मापन गर्न जाँदैछन् भन्ने बारे सोचबिचार नगरी सोशल मिडियामा डुबुल्की मार्छन। कसरी हुनेछ तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया कार्यक्रम संग सफलता मापन? थोरै ग्राहक सेवा कलहरू? अधिक ग्राहकहरु? कर्मचारी प्रदर्शन सुधार? उफ्रिनु भन्दा पहिले सोच्नुहोस्!
म एउटा कम्पनी प्रदान गर्न मन पराउने analogies को एक नजर हो बुर्ज दुबई। वर्तमानमा 800०० मिटर अग्लो, बुर्ज दुबई विश्वको सबैभन्दा ठूलो गगनचुम्बी भवन हुनेछ। यस बिन्दुमा, कसैलाई वास्तवमा थाहा छैन भवन कति अग्लो हुन्छ… मालिकहरूले नियोजित उचाई विस्तार गर्न जारी राख्छन्।
माथि चढ्नको लागि सक्षम हुनुको कुञ्जी भवन निर्माण गरिएको अभेद्य पूर्वाधार हो। बुर्ज दुबई फाउन्डेसनको 192० मिटर जमिनमा 50 8,000० वटा पाइल छन्, 110,000,००० वर्ग मिटर कभर, र ११०,००० भन्दा बढी कंक्रीट सहित!
प्रभावकारी रूपमा योजना बनाउने र तपाईंको कम्पनीको सामाजिक मिडिया रणनीति निर्माण यो सुनिश्चित गर्दछ कि यो एक फाउन्डेशन मा निर्मित छ कि सामाजिक मिडिया कार्यक्रम सबैको अपेक्षाहरू भन्दा राम्रो विकसित गर्न मद्दत गर्दछ। छोटो र तपाईंको कम्पनी माथि आउनुहोस् हुनेछ जोखिम असफलता - सबै धेरै सामान्य।
PowerPoint संग नेतृत्व गर्न को लागी मार्केटिंग?
वाणिज्यिक विफलता: इंटेलको स्टार कर्मचारी ... एक अभिनेता
मई 14, 2009 मा 11: 47 PM
मलाई भाग #5मनपर्‍यो - प्रचार र फाइदाजनक सहभागिता। उत्कृष्ट लेख ... धन्यवाद।